Myanmar to Fly 13 Relief Flights to Bring Back 1,800 Citizens until August | Myanmar Business Today
HomeBusinessMyanmar to Fly 13 Relief Flights to Bring Back 1,800 Citizens until...
Myanmar Citizens returning from Thailand and Malaysia with relief flight
The government of Myanmar is planning to fly 13 relief flights to bring bank 1,800 citizens stranded in foreign countries, according to U Kyaw Tin, Union Minister of International Cooperation.
It has operated 56 relief flights between May and July bringing back over 8,000 people.
“When bringing back our citizens, we need to consider how many people we can facilitate in quarantine centers. We can arrange many relief flights, but we need to think about the capacity of the Ministry of Health and Sports to quarantine people,” he added.
The country has been flying relief flights to bring back its citizens stranded in Thailand, South Korea, Singapore, India, Australia, Malaysia, Britain, Philippines, Bangladesh, Japan, UAE, France, Germany, China and Taipei.
Now, the number of Myanmar citizens stranded in other countries is much lower.
Other migrant workers are also returning to Myanmar crossing the border gates but the government allows only 700 people per week.
သြဂုတ်လအထိ Relief flight ပေါင်း ၁၃ ကြိမ်ခန့်ပြေး ဆွဲပြီးပြည်ပရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားအယောက် ၁၈၀၀ ခန့်ကို ပြန်လည် ခေါ်ယူရန် စီစဉ်နေကြောင်း အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်က ပြောသည်။
ထိုသို့ခေါ်ယူရာတွင် မေလကုန်ပိုင်းမှ ဇူလိုင်လအထိ Relief flight အကြိမ်ပေါင်း ၅၆ ကြိမ်ပြေးဆွဲကာ လူပေါင်း ၈၀၀၀ ကျော်ကိုအောင်မြင်စွာ ခေါ်ယူဖြစ်ခဲ့ကြောင်း ၎င်းက ပြောသည်။
“Qurantine ထားဖို့အတွက်နေရာလုံလုံ လောက်လောက်ရှိ၊ မရှိဆိုတဲ့ အဲ့အချက်ကိုအလေးထားစဉ်းစားရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့က Relief flight များ စီစဉ်ပေးချင်သော်ငြားလည်း ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမျက်နှာကိုကြည့်ရပါတယ်။ ကျန်းမာရေးဌာနက စီစဉ်ပေးနိုင်တဲ့အနေအထားကို မူတည်ပြီးတော့ ကျွန်တော်အနေနဲ့စီစဉ်တာဖြစ်ပါတယ်” ဟု ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက ပြောသည်။
COVID-19 ကပ်ရောဂါကာလတွင် နိုင်ငံတကာရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားများအား ပြန်လည်ခေါ်ယူခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခြင်း အစီအစဉ် တွင်ပြောကြားခြင်းဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် ထိုင်း၊ တောင်းကိုရီးယား၊ စင်ကာပူ၊ အိန္ဒိယ၊ သြစတေးလျ၊ မလေးရှား၊ ဗြိတိန်၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ ဂျပန်၊ ယူအေအီး၊ ပြင်သစ်၊ ဂျာမဏီ၊ ထိုင်ဝမ်၊ တရုတ်တိုင်ပေ၊ တရုတ်နိုင်ငံ စသောနိုင်ငံများမှ မြန်မာနိုင်ငံသားများကို Relief flight ဖြင့်ခေါ်ယူလျက်ရှိသည်။
ယခုအခါ ခေါ်ယူရမည့်နိုင်ငံခြားရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားများ နည်ပါးသွားပြီဖြစ်ကြောင်း ခေါ်ယူခဲ့ရသောနိုင်ငံများတွင် သြစတေးလျနှင့် မလေးရှားနိုင်ငံတို့တွင်စိန်ခေါ်မှု တချို့ရှိခဲ့ကြောင်းလည်းသိရသည်။ မလေးရှားရောက် မြန်မာများကိုလည်း ဆက်လက်ခေါ်ယူ သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြည်ပရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားများ နယ်စပ်ဂိတ်များမှလည်း နေ့စဉ်ဝင်ရောက်လျက်ရှိရာ တစ်ပတ်လျှင် အယောက် ၇၀၀ အထက် မဝင်ရန် သတ်မှတ်ထားကြောင်းလည်းသိရသည်။
Previous articleMyanmar needs to bring in whole ecosystem instead ofafactory: Serge Pun
Next articleCentral Bank Purchases $169 Mln in over Six Months